महामारीको सम्भावित ‘तेस्रो-लहर’ सामना गर्न सरकारको तयारी के छ? – Health Post Nepal
महामारीको सम्भावित ‘तेस्रो-लहर’ सामना गर्न सरकारको तयारी के छ?
२०७८ साउन २८ गते १५:२३
देशमा दिनदिनै संक्रमितहरूको संख्या बढिरहँदा सांसदहरूले सरकारलाई त्यसको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई र्‌याख्‌र्‌याख्ती पारेका थिए। सांसदहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सम्भावित कोराना भाइरसको तेस्रो लहर सामना गर्नका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए।
उनले केही महिनाभित्रै प्रशस्तमात्रामा खोप आइपुग्ने र त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा खपत गर्दै जाने बताए। त्यस्तैले खोप बाहेक अस्पतालहरूमा पनि आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजनहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले योजना बनाइसकेको बताए।
‘मन्त्रालयले प्रक्षपण गरे अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ९३ हजार कोरोना संक्रमित थपिने, ३८ हजार अस्पताल भर्ना हुने, र ९६९३ सघन उपचार चाहिने प्रक्षपण गरेको छ। सो अनुसार ६३० आईसियु बेड थपेर ३००० पुर्‌याइनेछ’ उनले भने ‘अहिले रहेका ९०० भेन्टिलेटरहरूमा १८० थप गर्ने योजना छ।’ उनका अनुसार सरकारीमा २०७५ एचडियु सेवा र निजी अस्पतालमा रहेको ७७८ एचडियुलाई बढाएर थप १४ सय एचडियु थप्ने प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताए।
तेस्रो लहरको जोखिम तयारीका लागि आईसियु बेड थप्दै सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उमेश श्रैष्ठले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै, हाल केन्द्रिय खोप भण्डारमा एक लाख ७३ हजार खोप मात्रा मौज्याद रहेको जानकारी दिएका छन्। भण्डारमा एक लाख ६१ हजार अस्ट्राजेन्का खोप र १२ हजार जोन्सन एण्ड जोन्सान खोप बाँकी रहेको बताए। उनले सबै प्रदेशहरुबाट २० लाख खोप वितरण भइराखेको बताए।
त्यस्तै उनले बालबालिकाका लागि सरकारी अस्पतालहरुमा १८० भेन्टिलेटर र २७५ आइसियु बेड थप्ने जानकारी पनि दिए। सबै निजि तथा बैंक तथा वित्तीय संथ्याहरूको सहयोगमा देशैभरि १६६ एचडियु, पिसियु र पिआईसियु निर्माण गर्न लागिएको पनि उनले बताए।
अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्थापन भइसकेको भन्दै उनले २७ वटा लिक्विड अक्सिजनको प्लान्ट राख्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। उनका अनुसार दुईवटा निर्माण भइसकेको छ भने ४ वटा निर्माणको प्रक्रियामा छन्। त्यस्तै १० वटा प्लान्ट निर्माणका लागि सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको उनले जानकारी दिए।
अहिले पनि नेपालमा प्रतिहप्ता १२० टन अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको छ। ७७ वटा जिल्लाको १९ वटा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने प्रकृया अनुसार पाँचवटामा निर्माण भइसकेको छ भने अरू प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए।
खोप केन्द्र व्यवस्थित गरिने
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले खोप व्यवस्थापनमा चाँडै नै सरकारले नयाँ कदम चाल्ने बताएका छन्। संसदमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै उनले भने– ‘अब यस्तो भीडभाड हुँदैन। देशभरि १६ हजारभन्दा धेरै खोपकेन्द्रहरू छन्। अब सबै खोप केन्द्रमा अरू पनि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिन्छ।’
प्राथमिकताका आधारमा सबैलाई खोप पुर्‌याउँदै जाने सरकारी योजना रहेको भन्दै उनले खोपका सन्दर्भमा सरकारले पूर्णरुपमा पारदर्शी हुने पनि बताए।
‘खोपमा अनियमितता अब हुँदैन। हामीले सबै सुरक्षा निकायलाई पनि त्यसमा ध्यान दिन भनिसकेका छौं’ उनले भने ‘खोपको किनबेच जस्तो काम अब हुँदैन।’
उनले अघिल्लो सरकारको पालामा ९७ लाख कोरोना खोप प्राप्त गरेको दाबी पनि गरे। श्रेष्ठले असार मसान्तसम्म ९७ लाख खोप प्राप्त भएको र ४२ लाखलाई मात्र लगाइएको जानकारी दिए।
‘नयाँ सरकार आएपछि खोप लगाउनेको संख्या ७५ लाख पुर्‌याइएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ हरेक दिन २ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई खोप दिइरहेका छौं।’
उनले असोज मसान्तभित्र १ करोड ८ लाख खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको दाबी समेत गरे। मन्त्री श्रेष्ठले तेस्रो लहरलाई मध्नजर गर्दै थप आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनमा जुटेको बताए।
अब खोप लगाउँदा काठमाण्डौ र तराईको जनघनत्व भएका ठाउँ र विद्यार्थी र युवालाई प्राथमिकता दिने सरकारको कार्ययोजना रहेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताए।